Nin soomaali ah oo lagu qabtay 16 kiilo oo qaad ah - NorSom News
Nin soomaali ah oo lagu qabtay 16 kiilo oo qaad ah
Sabtidii aan soo dhaafnay ayaa nin soomaali ah oo da ahaan jiro sodomeeyo lagu qabtay kontrollka Ørje, isaga oo baabuur ku wado 16 kiilo oo qaad la qalajiyay ah. Waxaana ay ilaalada kontrollka Ørje sheegeen in qaadkan lagu baakadeeyay kartoomo iyo bacaha lagu duuduubo hadiyadaha. Ninkan ayaa markii sheegay inuu wado caleen shaah, balse baaritaan kadib ayay ilaalada kontrollka ogaadeen in waxa uu ninka wado ay tahay qaad la qalajiyay. Waxaana markii danbe lagu ninkan lagu wareejiyay booliska isaga oo la siiyay ganaax lacageed oo dhan 10 000 NOK.
Tan iyo markii qaadka laga mamnuucay wadanka ingiriiska sanadkii 2014, ayaa waxaa hoos u dhacay qaadka soo galayay wadankan Norwey. Iyada oo sidoo kale ay yaraatay tirada dadka soomaaliyeed ee ganaaxa ama xabsiga ku muteysan jiray qaad ay wadanka soo galiyeen.
Xigasho: NRK iyo Smaalenenes avis
Previous articleIsmael Sulub: 14-sano jir soomaali ah oo leh talent kubadeed oo kasoo baxayo Ringsaker,Hedmark.
Next articleWar lagu farxo: SSB, 2119 qof oo soomaali ah ayaa shahaado jaamacadeed haysto Norwey